Suuriya: Shacab lagu laayey duqeyn
Ugu yaraan 28 ruux qof oo rayid ah ayaa geeriyootay kadib marki ay diyaarado dagaal duqeeyeen gobolka Deir Azzor ee bariga dalka Suuriya.
Dhimashada dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyay kooxaha xuquuqda aadanaha iyo warbaahinta qaranka ee Suuriya.
Koox kor kala socota xaaladaha bani’aadannimo ee Suuriya, xarunteeduna tahay magaalada London ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday warshad soo saarto barafka oo ku taalla xadka Suuriya, taasoo ay gabbaad ka dhiganayeen dad rayid ah habeenkii Khamiista.
Goobta la weeraray ayaa waxaa lagu tuhansanyahay in ay ka dagaalamaan maleeshiyo daacad u ah kooxda Daacish.
Kooxdani waxay sheegtay in illaa iyo iminka aysan kala caddeyn in diyaaradaha duqeeyay Deir Azzor ay yihiin kuwo kasoo kacay Ciraq iyo in ay yihiin diyaaradaha dagaalka Mareykanka. Laakin Wakaalada wararka Dowlada Suuriya ee SANA ayaa duqeymaha ka dhacay bariga Suuriya ku eedeysay isbaheysiga uu hogaamiyo Mareykanka.
Wakalaaddu waxay sheegtay in duqeynta lagu dilay ugu yaraan 30 ruux oo rayid ah, sidoo kalana lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan.
Mareykanka ayaa dhowr jeer bartilmaameedsaday fariisimo ay maleeshiyaadka Daacish ku leeyihiin Suuriya iyo Ciraq. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka Ciraq ayaa iyana dhowr jeer weeraro ka geystay gudaha Suuriya.